Ecobricks: Ipulasitiki, Ixazululwe.
Isixazululo sepulasitiki silapha...
Kunjengoba kulula njengokufaka i-Bottle ngePlastiki ...
Ukwenza isakhiwo sokwakha esingasetshenziswa ngokuphindaphindiwe ...
Ecobricks angenza amamojula we-lego
Ecobrick umhlaba wokwakha
Ecobricks kungenza izikhala zomphakathi ezihlaza
Ukuze sikwazi ukubuyela emuva ukuze siphile eHarmony ne-Ecosystems eziseduze nathi.
Uma sisindisa, sihlukanisa futhi siwapake amaplastiki emabhodleleni, singenza amabhlogo wokwakha angasetshenziswa kabusha kaningi.Sonke singakha izindawo eziluhlaza ezicebisa umphakathi wethu futhi susa ipulasitiki kusuka ku-biosphere. Sonke singakwazi ukuguquka kusuka epulasitiki kuze kuhambisane nama-greener nemijikelezo yomhlaba.
A Ecobrick iyisakhiwo esakhiwa kabusha esakhiwe ngokufaka ipulasitiki ehlanzekile neyomile esetshenziselwa ibhodlela leplastiki kumuntu ohleliwe. Ecobricks kusenza sikwazi ukuthatha umthwalo wemfanelo wethu weplastiki yethu
funda ngokuthi a ecobrick kungukuthi nokuthi kwenziwa kanjani
Noma ubhalise uphinde uqalise
Ibu Sofi behluleka ukulahla ipulasitiki yakhe bese beyidiliza emfuleni wendawo, ngakho wayilondoloza iminyaka emithathu. Khona-ke wahlangana ne-Ecobrick … futhi ugibele kusukela ngaleso sikhathi! U-Ibu Sofi uqhubekile ukufundisa abantu abaningi edolobheni lakubo indlela yokuhamba imfucumfucu! Funda indaba ephelele
ukwakha izinto ezimangalisayo nge Ecobricks
Emhlabeni wonke abantu basebenzisa i-ecobricks ukwakha ngendlela entsha. Kusuka efenithini yangaphakathi, kuya emasimini nasemapaki, ezakhiweni – umcabango wakho kuphela umkhawulo!
Funda ngezinhlelo zokusebenza zokwakha i-ecobricking
Njalo ekuseni, uJane uyahamba edolobheni eqoqa ama-plastiki avela ezitolo zendawo. Nsuku zonke wenza i-Ecobrick eyodwa. Ehla kancane futhi eqinile, wakha kabusha izindonga zakhe ezindala ngamabhodlela kanye ne-ecobricks. Manje, abantu bevela nxazonke manje ukuzobo!
Ecobricking isisombululo esijulile sepulasitiki
I-Ecobricks ingenye yezindlela ezimbalwa zokupaka ipulasitiki ephumelelayo. Ama-Ecobricks asusa ipulasitiki kusuka ku-biosphere nakusistimu yokuvuselela izimboni. I-Ecobricks iphakamisa ukuqonda kwemvelo futhi yenza abantu, imiphakathi kanye nezinkampani bakwazi ukushintsha kusuka epulasitiki.
Funda ukuthi kungani i-ecobricking isisombululo esijulile sepulasitiki.
“E-America, singase sithole izinto eziningi zokuvuselela kabusha, kodwa lokho akusho ukuthi ipulasitiki iyahamba.” i-Jo yonke i-plastiki yakhe iyayigcina ukuze iphume ohlelweni lokuvuselela izimboni.
Funda indaba kaJo egcwele..
Bhalisela ukuze ugcwalise ama-ecobricking wakho ngezincwadi zokuqondisa, izifundo, nezinhlelo zokusebenza.
Sinemithombo enhle kakhulu ukukusiza ukuthi uqalise kahle. Asikwazi ukulinda ukubona ukuthi i-ecobricking yakho. Bhalisela i-akhawunti ukuze ufinyelele amathuluzi ethu, iziqondiso, nezinhlelo zokusebenza ukuze ukwazi ukuqondana nemikhuba emihle, izimiso kanye nezinqubo.